महेशविक्रम शाह- मेरा लड्याइला बयालपाटा, तेरी सात सलाम नौ ढोग छ, तोजसो रामडो बाहाडी ठाउँ अँत मै कहि धेक्यान, लेकडाडो पनि तेरै नाउ हो राइक्या बयालपाटा, चिद्या पिपल पनि तेरै नाउ हो राइक्या बयालपाटा, त उसै पन रामडो छै, तोमी माइस कैले खाली हुदाइन धेकी बयालपाटा, जैदिन राम रंग हौं छोर्‍याटा छोर्‍याटी तेरी मथी मी सुद्यै उल्चौडाइ फुल्चौडाई हट्टा छन्,
लेखक भर्सेस प्रकाशक
Sunday, 01 April 2012 17:45	नागरिक
सन्तोष शर्मा- पाँचसात वर्षअघि नेपाली लेखक काखीमा पाण्डुलिपि च्यापेर प्रकाशककोमा धाउँथे। नयाँ पुस्तक छापिनु लेखकका लागि सौभाग्य हुन्थ्यो। फुटकर रचना मात्र छापिने लेखकको गणना हुन गाह्रै हुन्थ्यो। त्यसैले लेखक आफंैले सुखदुःख पैसा खर्च गरेर पुस्तक छाप्थे। केही साथीभाइलाई बाँड्थे, केही आफैं पुस्तक पसलमा छाड्न पुग्थे। पुस्तक बिके पनि पसलबाट पैसा उठाउन धाइरहनुपर्थ्यो।
Saturday, 31 March 2012 11:40	नागरिक
बसन्त बस्नेत- कक्षामा खुट्टा टेक्ने ठाउँ छैन। समाजशास्त्री तथा प्राध्यापक चैतन्य मिश्र ह्वाइटबोर्डमा घोट्टिइरहेका छन्। बीचैमा एक विद्यार्थी पस्छ। खाली कुर्सी नदेखेपछि आत्तिन्छ। तत्काल आफूलाई सम्हाल्छ। अनि सरले नदेख्ने गरी सबैलाई नमस्कार टक्र्याउँछ। विद्यार्थी 'हाँस्न चाहन्छन्' तर हाँस्दैनन्। लाग्छ, उनीहरू मिश्र सरको एकाग्रता भंग गर्नुलाई सानोतिनो अपराध मान्छन्।
तिम्रो छातीमाथि चुरे छ कि छैन?
Sunday, 25 March 2012 17:03	नागरिक
तीर्थबहादुर श्रेष्ठ- 'नेपाली नेपालको माया छ कि छैन?'
धेरै खेल्यै नेपालको तिमी छातीमाझ,
तिम्रो छातीमाथि पनि नेपाल छ कि छैन?
गोपाल योञ्जनका स्वरमा गुञ्जने यिनै गीतका गेडाहरूले प्रश्न गरेझैं चुरेसँग साइनो राख्ने ३३ जिल्लाका प्रतिनिधि सांसद एवं नेताहरू समक्ष 'तिम्रो छातीमाथि पनि चुरे छ कि छैन?' भन्ने प्रश्न तेर्स्याइ चुरे संरक्षण भेला बोलाउनुपरेको छ।